Wzọ 11 ka Increbawanye ROI nke Ọdịnaya Gị Ọdịnaya | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 1, 2015 Douglas Karr
Ikekwe nke a kwesịrị infographic nwere ike ịbụ otu nnukwu nkwanye… mee ka ndị na-agụ gbanwee! N'ụzọ doro anya, anyị nwere ntakịrị ihere na ole ụlọ ọrụ na-ede ọdịnaya dị omimi, ọ bụghị inyocha isi ndị ahịa ha, ma ghara ịmepụta usoro ogologo oge iji mee ka ndị na-agụ akwụkwọ banye ahịa.
M na-aga nyocha na nke a sitere Jay Baer onye choputara na otu blog post na-efu ulo oru $ 900 na nkezi. Mee ka eziokwu a bụrụ eziokwu na 80-90% nke ntanetị niile sitere na 10-20% nke posts ị bipụtara. Ihe ndekọ abụọ ahụ na-arụtụ aka na mkpa ọ dị itinyekwu oge na mbọ na ọdịnaya ọ bụla ị bipụtara.
Agbanyeghi na egosiputa ahia di n'ime ya dika effectiveber nke oma na emeputa okpukpu ato ka o na - eduga ahia ahia, nani 6% nke ndi ahia choro na mgbali ha “di oke ire.” Yabụ kedu ka anyị ga - esi gbalịsie ike na - agba mbọ ịre ahịa ọdịnaya anyị iji hụ na ha na - emetụta ala ahụ? Iji chọpụta Pure Chat soro ndị ọkachamara na-ere ahịa ọdịnaya dị na Clearvoice ka (ndi na-eme ihe ngosi ahia di egwu!) Imeputa aro ndi a ga - enyere gi aka imezi onu ahia gi site na ihe okike rue ntughari. Arielle Hurst, Mkparịta ụka dị ọcha
Uzo iri na otu iji nwekwuo ROI nke ahia ahia
Ihe omuma ihe omuma a site na Pure Chat na Clearvoice nke ana akpo Drive Drive with Content na-enye aro iri na abuo iji ghagharia ike gi n’ile ahia.
Nọgide na Funnel - Google na-akpọ ndị a ogeOge mgbe onye na-azụ ahịa na-achọ ihe ọmụma ma ị nwere ike ịnọ iji nyere gị aka iduzi mkpebi mkpebi ha.
Gụnye Akaebe - Onye na - emetụta mkpebi ịzụrụ bụ ịghọta onye meela mkpebi ahụ. Site na ịkwalite ụlọ ọrụ ndị ahụ, ị ​​na-eme ka onye na-agụ gị mara na ndị ọzọ ejirila obi iru ala kwubie na nzụta ahụ dị mma.
Expmụbawanye na Ozi Na-aga nke Ọma - Anyị na-eme nke a oge niile! Anyị na-ewe akwụkwọ ozi ewepụrụ wee mepụta micrographic iji kesaa na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ozi infographic, yana ikekwe webinar ma ọ bụ ebook. Ọ bụ kpọmkwem ihe dugara anyị akwukwo ohuru na Meltwater!
Nnwale na Mgbasa ozi Niche - mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na isiokwu ndị dị ogologo-ọdụ nwere ike ịnye ọnụego-akwụ ụgwọ ọ bụla dị oke ala ma kwalite okporo ụzọ dị oke mkpa na ọdịnaya gị.
Mepụta Mmekọrịta Ọdịnaya - Anyị na-arụ ọrụ ugbu a VentureBeat iji chụpụ ụlọ ụfọdụ mmekọrịta mmekọrịta. Nnyocha miri emi ha baara ndị na - agụ akwụkwọ anyị uru nke ukwuu nke mere na ọ bara uru na anyị ga-ebugara ndị na-ege anyị ntị ntị ibe anyị ma na-akwalite ọdịnaya anyị na-arụ.
Leverage Ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ - Anyị Ajụjụ ọnụ Pọdkastị ha niile bụ maka ndị na-azụ ahịa ahịa na ịkwado ntụkwasị obi n'ime ụlọ ọrụ anyị. Nakwa, uru ndị a na-enye ndị na-ege anyị ntị ndụmọdụ dị ịtụnanya!
Echefula CTA - Ọ bụrụ na m nwere ike ịgụ ọdịnaya gị na enweghị ụzọ iji soro gị gaa n'ihu (ma ọ bụ nhọrọ ndị ọzọ dịka ụdị ndebanye aha email), gịnị kpatara ị ga-eji bipụta?
Tinye Live chat - Ide ede ezughi. Promkwalite ezughị. Oge ụfọdụ ịkwesịrị ịkwalite ndị na - agụ akwụkwọ gị ma jụọ ha otu ị ga - esi nye aka. Nzaghachi ga-eju gị anya!
Ntughari na-eduga - Dịka ndị na-azụ ahịa na-eme mkpebi nzụta, ha na-agbagha gburugburu nsonaazụ ọchụchọ, netwọkụ mmekọrịta, na ihe ndị ọzọ. Iweghachite na-eme ka ika gị na ohere dịrị gị elu!
Soro Eziokwu na - 30-50% nke ahịa na-agakwuru onye na-ere ahịa na-aza ụzọ. Na-azaghachi ọbụna ma ọlị?
Jiri Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Email - Ọ bụghị mmadụ niile dị njikere ịzụta na nkwekọrịta mbụ, mana ha nwere ike ịdị njikere iso gị n'okporo ụzọ. Nzụlite email bụ ụzọ kachasị mma iji soro ha na-akpakọrịta ma ha ga-erute mgbe ha dị njikere!
[igbe ụdị = ”download” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”90%”] Gbalia ibudata Ebook m ohuru edere maka Meltwater, Etu ị ga - esi depụta ọdịnaya gị gaa njem ndị ahịa na - atụghị anya ya, maka ịmatakwu ihe banyere ide ederede nke ga-eme ka nloghachi gị na azụmaahịa azụmaahịa. [/ igbe]
Tags: kpọọ ka ememmekọrịta ọdịnayanloghachi ọdịnaya na egoọdịnaya roiemail na-azụlitesochienweghachi nloghachi na itinye egonkata ndụweghachite ọdịnayaretarget na-edugaretargetingọdịnaya ahịaahịa chụpụrụ ọdịnayaahịa oge nzaghachielekọta mmadụ mgbasa ozitestimonials